Kuratidza zvinyorwa neelebheri programming makosi
Ungadzidza sei kuronga muPython
Python mutauro wepamusoro-wepamusoro wekunyora mutauro wakagadzirwa muna 1991 naGuido van Rossum. Iyo inopa inosimba yekudzora yemhando dzedatha uye inotsigira akasiyana-siyana ekugadziridza mapadigital, inosanganisira chinhu-chakanangidzirwa, chakakosha, chiri kuita, kana chinoshanda. Muna 2018 mukurumbira wayo wakawedzera uye ukava mumwe wemitauro inozivikanwa. Muhuwandu hwenzvimbo dzakasiyana unosvika kune imwe yenzvimbo nhatu dzekutanga, kunze kwenzvimbo dzekutanga.
Pikoni irikudziridzirwa sevhisi yevhu inoshandiswa inopa rusununguko rwekuisa magwaro emapuraneti akawanda (Unix, MS Windows, macOS, Android); mune zvizhinji zveGNU / Linux distributions, Python chikamu chekuiswa kwekutanga.
Pakati pezvimwe zvinhu, inoshandisa zope sevharivha yekushandisa, iyo yekuisa uye yakawanda yezvigadziriswa zvishandiso zveRaff Hat's Linux distribution.
Mutauro wePython uri kubuda, uye nekufamba kwenguva, shanduro nhatu dzisingapindirani, Python (1), Python 2, uye Python 3, dzakagadzirwa.
Python 1 haisisiri kushandiswa. Python 0.9.0 yakaburitswa muna 1991, Python 1.0 muna 1994…